Purushottam Adhikari – पुरु's कर्नर
Home » Articles posted by Purushottam Adhikari
Author Archives: Purushottam Adhikari
By Purushottam Adhikari 10, 04, 2014
म लगबग १३ वर्षको थिएँ । हरेक वर्षझैँ दशैँ मनाउन काठमान्डौबाट आफ्नै गाँउ धादिंग गएको थिएँ । त्यतिवेला दशैँ एउटा खुसीको पोको थियो, धेरै दिन देखिको रमाउने धोको थियो । शहरमा पढ्ने, अनि दुई चार दिन मात्र गाँउ बस्ने भएकाले म सानोतिनो “हिरो” नै कहलिन्थें । फूलपातीको दिन थियो । “आउ जाम बाहिर डुल्न”, सन्तोषले […]
By Purushottam Adhikari 08, 29, 2014
“द वर्ल्ड इज अ बुक, एण्ड दोज हु डन्ट ट्राभल रीड अन्ली वन पेज ।” अलिक पहिले कुनै विद्वानको उद्दगार एउटा कपीको अन्तिम पानामा देखेको थिएँ । त्यसैबेला देखि नयाँ ठाउ घुम्ने र नयाँ परिवेशमा भुल्ने म भित्रको भुत थप जुर्मुराएको थियो । यात्रामा हरेक पाइलाले नयाँ कुरा सिकाउछ, बुझाउछ र आफैलाई भुलाउछ । तर यो […]
Post Tagged with अनुभव, ट्विटर, डाँडाकाँडा, पोखरा, रमाइलो, हाइकिंग
By Purushottam Adhikari 07, 21, 2014
२०५९ साल, कक्षा ४ मा पढिन्थ्यो । रवि सर आज स्कुल आउनुभएको थिएन, त्यसैले अन्तिम घन्टी भएन । स्कुल अलिक चाढै नै छुट्टी भयो । राम, गोपाल र म संगै घरतिर लाग्यौं । असारको मौसम, फाट्टफुट्ट पानी छिटाइरहेको थियो । पारी डाँडामा भने ठूलै पानी दर्कीरहेको थियो । बिहान घाम लागेकोले ओढ्नलाई प्लास्टिक ल्याएको थिएनौं […]
यो लेख गण्डकी मेडिकल कलेजको वार्षिक स्मारिका “Venture vol.2” मा प्रकाशित भएको थियो । दोश्रो वर्षको बोर्ड एक्जाम आउन अव मात्र २ महिना वाँकि छ । होस्टेलमा दिउसोको खाजा खाने समय भएको छ, चिया र विस्कुट लिएर कोठामा साथीहरु जम्मा भएका छन् । अझै २ महिना वाँकि छ भनेर प्राय सबै ढुक्क देखिन्थे । पढाइकै […]
Post Tagged with पढाई, परिक्षा, मेडिसिन
प्रख्यात बैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटन ले कुनै समयमा भनेका थिए – म ठुल्ठुला ग्रह र पिण्डहरुको गति नाप्न सक्छु, तर मानिसको पागलपना नाप्न सक्दिन। उनको यो भनाई त्यतिखेर अलिक फरक सन्दर्भमा आएको थियो, तर यसले अहिलेको स्थितीमा मानव सभ्यता र यसको विकासक्रम कतातिर उन्मुख छ भन्ने कुरालाई ज्वलन्त रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यहाँ चर्चा […]
By Purushottam Adhikari 05, 01, 2014
भाग २ पढ्नुभयो? छैन भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस !! (Smoking is injurious to health) अगाडी सरला उभिरहेकी थिइ, मेरो स्कुल पढ्दाको साथी । हाम्रो घरभन्दा केहि पर मात्र उसको घर थियो । स्कुलमा हामी मिल्ने साथी थियौं । हातको सिगरेट एसट्रेमा निभाएँ । “अँ, म” मैले जवाफ फर्काएँ । “कताबाट आयौ यतिवेला ?” उसले सोधी […]
By Purushottam Adhikari 04, 18, 2014
(Smoking is injurious to health) भाग १ पढ्नुभो? छैन भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला! आँखा खुल्यो, कुनै लामो निन्द्राबाट व्युझेझैँ भान भयो । टाउको भारी थियो, निधारमा पट्टीहरु वाधिएका थिए भने हातमा पनि सेता व्याण्डेज कसिएको थियो । म कुनै जेलमा निर्ममतापुर्वक यातना दिइएको कैदी झैँ लाचार भएर अस्पतालको शैयामा पल्टिरहेको थिएँ । नजिकै स्ट्याण्डबाट सलाइनका […]
(धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ) सिमसिम पानी परिरहेको छ । भण्डारी रेस्टुरेन्ट एण्ड खाजा घर आइपुग्दा म गाडीबाट ओर्लिएँ । रोडको डीलमा रहेको रेस्टुरेन्टकै खरले छाएको हटमा गएँ । नजिकै अर्को हटमा दुई जोडी कुइरे र एक नेपाली गाइड पनि सुस्ताईरहेका छन । ठ्याकै नाम ठम्याउन सकिन तर कुनै इम्पोर्टेड व्राण्डको वाईनको चुस्की लगाइरहेका थिए […]
यो लेख अनलाइन डिजिटल पत्रिका “सेतोपाटीमा” छापिएको थियो!! आदरणीय पत्रकार बन्धुहरु, नमस्ते ! म एक आम सर्वसाधारण नेपाली। हजुरहरुको पत्रिका, समाचार र रिपोर्टहरुको नियमित पाठक पनि । समाचार सम्प्रेषण, प्रसारण र प्रकाशन सम्बन्धी केहि गुनासा र सुझावहरु भएकाले यो पत्र लेख्दैछु। म पत्रकारिताको विद्यार्थी नभएकाले यस विषयवारेमा मेरो बुझाई, ज्ञान र चेतना कतिसम्म सहि या […]
Post Tagged with पत्रकारिता, वेथिति, समसामयिक
यो लेख अनलाइन डिजिटल पत्रिका “सेतोपाटीमा” छापिएको थियो!! साँझ झमक्क परिसकेको छ। आधा घण्टादेखि माइक्रो गुड्न सकेको छैन। विपरीत दिशाबाट हुइँकिदै आएको रात्रिबस र ट्रकहरुले उडाएको धुलोबाट बच्न माइक्रोको सबै झ्याल बन्द छन्। सडक धुलोले कुइरीमण्डल बनाएको छ भने बाटोमा मोटरसाइकल चालकहरु खाल्डाखुल्डी र धुलो चिर्दै अघि बढ्दैछन्। पट्यारलाग्दो त्यो कुराइबाट बल्लतल्ल गाडी गुड्यो। फेरि […]